Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. लाखौको तरबुजा बारीमै कुहियो – Emountain TV
कपिलवस्तु, ९ जेठ । कपिलवस्तुमा भारतीय तरबुजाले बजार पाएपनि स्थानीय कृषकहरुको तरबुजा बजार पाएको छैन । उत्पादित तरबुजाले बजार नपाउँदा कृषकको दैकिकी चुल्हो बल्न गाह्रो भएको छ उत्पादित तरबुज खेतबारी मै कुहिन थालेपनि खरिद गरिदिने कोही छैन । जिविकोपार्जनका लागि मुख्य आम्दानीको स्रोत तरबुजा खेति भएपनि बजार पुराउन नसक्दा कृषकको दैनिकी चलाउन गाह्रो भएको छ ।
कपिलवस्तुको बुद्धभुमि नगरपालिका–१० का कृषकले लगाएको तरबुजाले बजार पाउन सकेको छैन । भारतबाट निधर्वाद रुपमा तरबुजा आयात भइरहेको छ । तर, कपिलवस्तुका कृषक तरबुजा बारीमा सडाउन बाध्य छन् । तरबुजा बजार पुराउन स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नपर्ने हो,तर स्थानीय सरकार कृषकको तरबुजा बारे बेखबर छन् ।
कृषकको तरबुजाले बजार नपाउदा कृषकहरुको उत्पादित तरबुजा खेतबारीमै सड्न थालेको छ । तरबुजा बिक्री नभएपछि वर्ष भरीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने कृषकलाई चिन्ता छ । बगरे तरबुजा खेतिका लागि भन्दै लगानी धेरै लगाए पनि उत्पादित तरबुजाले बजार पाएन । हजारौँ टन तरबुजा बारी मै कुहिन थालेको छ ।
कृषकले लगानी समेत उठाउन नसक्ने भएको छ । कृषिका लागि सरकाले दर्जनौ ठेलीको चाङ लगाउदा वास्तविक कृषक आफ्नो उत्पादन खेर गएको छ । कृषि उपज खेर गइरहदा पनि राज्यले बेवास्ता गरेकोे उनीहरुको दुखेसो छ ।
पहँुचवालाहरुले मात्र राज्यबाट सहयोग पाउने गरेका छन, तर वास्तविक किसान जहिले पनि यस्तै समस्या भोग्न परिरहेको छ । । कृषि सेवा केन्द्रहरु राजनैतिक पहुँच हुनेहरुको पकडमा छन् । सरकारी अड्डामा समेत पहँुच नहुदा थप समस्या भोग्न परेको कृषकको भनाइ छ ।
यो पीडा कपिलवस्तुका कृषकहरुको मात्र होइन, यस्ता समस्या भोग्न धेरै कृषकहरु छन् । यद्यपी राज्यले कृषिका नाउमा वर्षेनी अर्बाै बजेट खर्च गर्ने मात्र होइन, कृषकका नाउमा सेमिनार गोष्ठि गर्ने गर्दछ ।
तर, सरकारी कार्यक्रमले कपिलवस्तुका किसानको खेतबारीमा नपुग्दा कृषक आफ्नो उत्पादित खरबुजा सडाउन बाध्य छन् । यसर्थ आयातलाई निरुत्साहित गर्न र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न नसके सरकारको कृषिका नारा फगत कागजी दस्ताबेज मात्रै हुनेछन् ।